शरीरका अंग दुख्ने र सुनिने समस्या छ ? दैनिक अमला खानुस् - Internet Khabar
Home tips शरीरका अंग दुख्ने र सुनिने समस्या छ ? दैनिक अमला खानुस्
एजेन्सी । अमला हाम्रो गाउँघरमा खेतबारी, खरबारीहरुमा सजिलोसंग पाइने फल हो । शहरी क्षेत्रमा पनि बजारमा यो फल सजिलैसंग किन्न पाइन्छ । अमलालाई फलको रुपमा भन्दा बढी नेपाली भान्सामा अचारको रुपमा खाने चलन छ । त्यस्तै, मुख ताजा राख्नको लागि अमला खाने मानिसहरु पनि हुन्छन् । अमला स्वादमा जति मीठो छ, त्यति नै स्वास्थ्यको लागि गुणकारी पनि छ।
अमलामा क्याल्सियम, फाइबर, आइरन, भिटामिन सी, पोटासियम, भिटामिन डी, भिटामिन डी कम्प्लेक्स, प्रोटिन लगायतका पोषण तत्वहरु हुन्छन् । जाडोको समयमा यदि अमला दैनिक रुपमा खाने हो भने यसले हामीलाई चिसो लाग्नबाट बचाउँछ। अमलामा हुने भिटामिन सीले हाम्रो शरीरको रोगसंग लड्ने क्षमता बढाइदिन्छ । जसले गर्दा सामान्या सरुवा रोगहरुबाट हामी बच्न सक्छौं । यसले मुटुलाई पनि स्वस्थ बनाइदिन्छ।
अमलाको दिनहुँ सेवनले शरीरका विभिन्न अंग दुख्ने तथा सुन्निने समस्या पनि निको हुन्छ। अमलामा हुने एन्टी अक्सिडेन्ट नामक तत्वले उक्त काम गर्छ । यसले शरीर स्फूर्त बनाइदिन्छ । अमलाको सेवनले मुख सम्बन्धी समस्याहरु कम गरिदिन्छ, सास गन्हाउने समस्याबाट छुटकारा दिन्छ । अमला खाने बानीले दांत बलियो र सेता हुन्छन् । त्यस्तै घांटीको सामान्य समस्या पनि निको हुन्छ । अमलाले पाचन अंगहरु बलियो बनाइदिन्छ । यसले हाम्रो पाचन प्रणाली स्वस्थ बनाइदिन्छ । त्यसैले सबैजसो पेट सम्बन्धि चुर्णमा अमलाको प्रयोग गरिएको हुन्छ।
अमलाको सेवनले हाम्रो छाला, नङ र कपाललाई सुन्दर बनाइदिन्छ । यसलाई हामीले पेस्टको रुपमा पनि अनुहारमा लगाउन सक्छौं । त्यस्तै, कपालको सुन्दरताको लागि अमला अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । अमलाको सेवनले मानसिक थकान समेत कम गरिदिन्छ।
Previous articleकेन्द्रीय कारागारमा १३ कैदीबन्दीको मृत्यु
Next articleएफसी यू–२३ छनोट : नेपालले पहिलो खेल ओमनसँग खेल्ने